Amehlo oMnyama ka-1981 PDF | XperimentalHamid
Amehlo oMnyama ka-1981 PDF
Matshi 19, 2020 Matshi 15, 2020 by Qasim Khan
Inqaku elineminyaka engama-40 ubudala Amehlo oMnyama ibhalwe ngu Dean Koontz kwaye yapapashwa kwi 1981 ubuyela kwindawo ebonakalayo. Ekuvukeni kwe-coronavirus kunye nokufana okukhohlakeleyo kwinoveli kwinto eyenzekayo kwihlabathi lokwenyani ngoku. Inoveli isenza ukubuya kwakhona kwaye kufuneka ujonge ikopi yale noveli inobuhle spooky Isiphelo sobumnyama 1981 kwifomathi yePDF. Ewe kunjalo, ukwindawo elungileyo.
Ngubani uDean R. Koontz
Amagqabantshintshi ngeeNohlo zaMnyama
Abona bantu baphambili kwiiNoveli Amehlo oMnyama
Amehlo oBumnyama bePlani
Umbhali kaDean Koontz Amehlo oMnyama
UDean Ray Koontz, owaziwa kakhulu njengo-Koontz okanye u-Dean Koontz ngumbhali waseMelika owazalwa ngo-1945. Ngaphambi kokuba igama lakhe libe yi-buzzword, u-Koontz wayedume kakhulu kubaxhasi bakhe abathandabuzayo. Umnumzana Koontz ubandakanya ukoyikeka, intsomi yesayensi, amaqobelo, imfihlakalo, kunye nemfihlakalo yokufaka uluhlu lwezinto ezininzi azidalileyo kuLuhlu oluMangalisayo lomThengisi waseNew York, apho zili-16 amaphepha akhe kunye nabantu abasebenza nzima abayi-14. Phambi kokupapasha umsebenzi wakhe negama lantlandlolo, u-Koontz wasebenzisa amagama weepeni ezininzi ngexesha lomsebenzi wakhe wokuqala kubandakanya u "David Axton", "Deanna Dwyer", "KR Dwyer", "Brian Coffey", kunye no "Leigh Nicholas"; kwaye wathengisa ngaphezulu kweekopi ezingama-450 ezigidi zeenoveli zakhe ezili-105, iinoveli ezininzi kunye nokuqokelelwa kwamabali amafutshane ukuza kuthi ga ngoku.
I-Dean Koontz incwadi wuhan amehlo obumnyama iphepha 312, 333, 353, 355, 366
Umama uthumela unyana wakhe okuphela kwakhe kuhambo lwenkampu yoMfana Scout kwiintaba. Umkhokeli wohambo uye kwindawo okungenani kangangezihlandlo ezili-16 ngaphambili ngempumelelo, de kwangoku. Bonke abantu abasebhasini kubandakanya inkokeli, inkwenkwe, kunye nabahlobo bayo, kunye nomqhubi webhasi, banyamalala. Iivenkile zeendaba zichaza ingozi eyenzeke ngelixa ibhasi inyuka yenyuka intaba. Kamsinya nje ukuba umama osentlungwini avumelane nenyani entsha aqale ukufumana imiyalezo e-spooky ukusuka naphina, esithi unyana wakhe akafanga. Njengamagama asuka kumshicileli, ubhala kwiibhodi zebhodi kunye nezinye iimpawu. Ekunye nomhlobo wakhe omtsha, uElliot Stryker, umama "uChristina Evans uphuma esiya emsebenzini esiya kufumanisa ukuba libali lokwenyani nelinyelwayo lokufa konyana wakhe.
Ngaba inoveli enguMehlo oMnyama yaxela kwangaphambili ukuphuma kwe-coronavirus yowama-2020 phantse iminyaka engama-40 eyadlulayo? Yintoni inyani, ukwazi ukuba iyintoni intsomi kwaye iyinyani, ungaphoswa linqaku lethu elichaza lonke ibali elikweli nqaku
Into ekufuneka ifundwe: I-COVID-19 Ibuprofen yeendaba ezingeyonyani
UChristina Evans - umama ongatshatanga kaDanny (inkwenkwe)
UMichael Evans-nguyise kaDanny
U-Elliot Stryker-Umsebenzi wobukrelekrele emkhosini kunye nomthandi wobuKristu
UDanny - unyana kaChristina
Leticia Maria-ugqirha kagqirha
UVincent - Umntu obulala umntu oqashwe yiProjekthi Pandora
UAlexander - umntu okhokela iPandora yeProjekthi
Ifikile le nto, ngenxa yokufana ngokufana kwegama lesifo nentsholongwane kunye nendawo yemvelaphi. Omnye wemihlathi yencwadi ufundeka ngolu hlobo, "Bayibiza le nto" yi-Wuhan-400 "kuba yayiphuhliswe kwiilebhu zabo zeRDNA ngaphandle kwesixeko saseWuhan, kwaye yayingowama-400 ubunzima bezinto ezincinci ezenziwe ngabantu ezenziwe kolu phando. kwiziko ”. Elinye ibango elenza ukuba iinwele zime zime esiphelweni liphepha elityholwa ngokuvela kwincwadi echaza kwangaphambili “isigulo esibi sepneumonia” esifana nonyaka ka-2020.
Ibali le noveli lijikeleza inkwenkwana "UDanny Evans" osweleke eNevada xa inkwenkwana yakhe iScrop Bus ityibilika intaba, ibabulala bonke ababekhwele.
Emva konyaka okanye ngaphezulu, umama wakhe "uChristina Evan", ngoku odibene nommeli ka-Elliott Stryker, uqala ukukholelwa ukuba ubonile uDanny. Imiyalezo ivela ibonisa ukuba unyana wakhe usenokuba uphila kwenye indawo. Uqinisekile ukuba into ayikholelwayo iyinyani, ukukholelwa kwakhe kuyakhula ngokuhamba kwexesha kwaye ufuna ukukhupha umzimba womntwana wakhe engcwabeni ukuze abeke iingcinga zakhe eziphosakeleyo kunye novalo. Njengoko ukukholelwa kwakhe kukhula, abantu abamngqongileyo baqala ukuhlala kude kuye, kwaye ufumana yedwa ukuba alwe nengxaki ebomini eye yamtyhilela yona. Kwiphulo lakhe lokufuna ubuqhetseba nenyaniso, uzama ukufumanisa ukuba unyana wakhe uDanny ufile na kuhambo okanye, njengoko imiyalezo ekrokrelayo, isaphefumlela kwenye indawo.
Emva komzabalazo omninzi, ulandelisa unyana wakhe ukuya e-Wuhan, apho agcinwa khona emva kokuchazwa ngengozi yintsholongwane ebulalayo ebizwa ngokuba yi "Wuhan-400".
Ekugqibeleni, uyaphumelela ekuqhekezeni elona bali kanye kwaye efumanisa ukuba yayililinge elixhaswe ngurhulumente eliya ngokungalunganga njengoko omnye wososayensi ehamba ngokungalunganga kunye neziphene e-USA, apho umsebenzi weelebhu azingcolisa ngokwakhe ngengozi aze asasaze intsholongwane. Uhamba ebaleka engafunekiyo evela kubasebenzi bezokhuseleko, uyazingisa kwimfuno yakhe yokufumana inyaniso. Ukudlula kwiindawo ezigcinwe kakuhle nezikhuselekileyo, uyayazi imfihlo efihliweyo. Umntu obaleka ngaphakathi ungene kwindawo leyo wabelana ngeenkcukacha zokuvavanywa kwegazi kovavanyo olwenziwe ngaphakathi ngaphakathi kwendawo kunye neendlela zokungena nokuzibonela ngokwenzekayo ngaphakathi.
Njengoko ikati iphuma ebhegini, uChristina no-Elliot bayazi ukuba, ilabhoratri "yempi yamachiza", esekwe ukuphuhlisa izixhobo zebhayoloji nezekhemikhali, ukuba zisetyenziselwe amazwe antshaba. Bayazi into yokuba bonke abantwana abancinci babafana bakaScouts 'babulawa kwaye, eneneni, babanjwa ukuze basetyenziswe kuvavanyo abathi ngelishwa bafa, wasindisa uDanny nje ngesixhobo sabo esibulalayo besilela ukumbulala. Ngeli xesha, wafumana amandla okuthetha nonina, ngaxeshanye wabulala abaphandi abaphambili kwikhondo lakhe lokugqibela lokubaleka.
Ukonwabela nokufunda inoveli epheleleyo sikunike ikopi yencwadi kwifomathi yePDF. Ukukhuphela Amehlo oMnyama ka-1981 kwiPDVD cofa kwikhonkco elingezantsi kwaye wonwabe kwisantya sakho kunye nesantya esikufaneleyo.
Ukukhuphela mahala mahala
iindidi iincwadi tags incwadi, Dean Koontz, PDF Post yokukhangela
I-My2020census.gov: Isilumkiso seScams!
AA incwadi enkulu
Iingcamango ezili-12 kwi "Amehlo oBumnyama 1981 PDF"
Epreli 5, 2020 kwi-10: 04 AM
Matshi 18, 2020 kwi-8: 36 AM
Kutheni le nto ikhohlakele kangaka INDALO ukubulala abantu abamsulwa ngovavanyo.
Ukubawa namandla ezizwe ezinobugovu, ndiyakudalela, wena Mdali, ukuze uzive ukoyisa izizwe njengoko wenzayo xa wawukhusela ama-Israyeli.
Matshi 17, 2020 kwi-7: 23 PM
Matshi 17, 2020 kwi-12: 14 PM
Lixesha lokuba uyeke ukusasaza le nkunzi yenkomo! Njengoko abanye besitsho, iphepha ekwabelwana ngalo lisuka esiphelweni seentsuku nguSylvia Brown, ozibhengeze ngengqondo. Yabhalwa emva kobhubhane weSARS, kunzima kangako ukuzolula.
Matshi 17, 2020 kwi-5: 01 AM
Funda nje Amehlo oMnyama. Ndivumelana noJamie. Ukuqhambuka kuka-2020 kwakungekho nanye kuloo ncwadi. Yintoni egqithiselwa ku-Fb inenkohliso njengoko ibonisa incwadi enye kuphela eyapapashwa ngo-1981 ngokucacileyo egubungela konke ukuphuma kwe-2020 kunye no-400. Kuxoxwe ngo-400 kuphela.
Epreli 2, 2020 kwi-4: 26 PM
"Wuhan 400" kuthetha !!
Matshi 16, 2020 kwi-9: 40 PM
Iphepha malunga nokuqhambuka ngo-2020 AKUKUFUNDI incwadi ye-Koontz. Isuka kwincwadi ebhalwe nguSylvia Browne. Yenza uphando lwakho.
Matshi 17, 2020 kwi-5: 35 AM
Ukuphela kweentsuku-uSylvia Brown
Matshi 18, 2020 kwi-12: 54 PM
Enkosi ngale nkcukacha ngobubele usixelele iphepha
IVirginia Rollins Natividad
Matshi 16, 2020 kwi-7: 16 PM
YayingengoWuhan kuhlelo lokuqala! YayinguGorki- 400 waseRashiya!
Matshi 18, 2020 kwi-12: 49 PM
Enkosi Jamie ngokulungiswa ngenye indlela hleze abantu abenjengam bangalahlekiswa ngobubele banike i-UE ulwazi oluthe kratya malunga nencwadi ebixubusha ngalo ikhefu.
Matshi 16, 2020 kwi-6: 24 PM
Ndinayo phantse yonke incwadi ebhalwe nguDean Koontz. Uyingcamango yengqondo ngokungabaza. Ndifunde ngaphezulu. Ungumthandi wezinja kwaye oko kumbeka amanqaku aphezulu kwincwadi yam. Unemincili. Ngaba uphando oluninzi lubalisa ibali lakhe aze alibandakanye kwintsomi enomdla.